Kumenywa umphakathi kwingqungquthela | News24
LAST UPDATED: 2018-02-20, 13:04
Kumenywa umphakathi kwingqungquthela
Isithombe: KAlisha Naicker UNKS Nelly Bhengu waKangcolosi owaye thamele le ngqungquthela ngonyaka odlule eyayigqugquzelwe inhlangano iRobinhood Foundation eHillcrest.
Siyakholelwa ekutheni abantu baseNingizimu Afrika banga phumelela kwezamabhizinisi uma benolwazi, amakhono bekwazi ukuxhumana nabanye abantu baphane ulwazi olubanzi ngezamabhizinisi. Kukhona iqembu esinalo labantu asebephumelele ngokuziqalela amabhizinisi abo futhi abanye baphethe amabhizinisi, laba banesifiso sokwabelana ngolwazi abanalo kulabo abazobanathi ngalolusuku.
ABE-The Robinhood Foundation bamema wonke amalungu omphakathi ukuba abe yingxenye yengqungquthela yokuqeqesha nokugqugquzela osomabhizinisi abasafufusa nalabo abafisa ukuba ngosomabhizinisi bakusasa.
Le ngqungquthela eyaziwa ngokuthi yi-Entrepreneurs 4 Africa 2016, ezoba ngomhla ka-12 nomhla ka-13 kuNhlangulana (July).
Le ngqungquthela izoba e-City Hill Church, eHillcrest izo qeqesha abantu abanga 600 ngolwazi, amakhono nezeluleko nakho konke okudingakalayo uma ungumuntu onebhizinisi noma ofisa ukuba nebhizinisi.
Umsunguli we-The Robinhood Foundation uNks Cindy Norcott uthe le ngqungquthela izothatha izinsuku ezimbili lapho abantu bezobe befundiswa ngokuningi okuphathelene nokuba ngosomabhizini. “Kuningi abantu abazokuzuza kule zinsuku ezimbili yingakho singakhethanga bala lamuntu samema wonke umuntu. Lo mcimbi wenzelwe abantu abangosomabhizinisi ngisho nabasafufusa noma abanemibono emihle ngokuqala ibhizinisi ngisho nabafundi abasanda kuqeda esikoleni kodwa abadinga izeluleko.”
Uqhube wathi: “Singabakwa Robinhood Foundation sikholelwa ukutheni iningi labantu base Ningizimu Afrika bangaba osomabhizinisi abaqavile kuphela nje uma bengathola ukwelulekwa okufanele, beqeqeshelwe amakhono, banikwe ulwazi olubanzi, bexhumaniswe nabantu abahlukene bese benikezwa amathuba.
Le ngqungquthela izoqinisekisa ukuthi konke lokhu kuyenzeka kule zinsuku ezimbili ngoba kuzobe kumenywe izikhulumi ezahluka hlukene ezinamabhizinisi.
Lapho bezobe begqashisa abantu ngolwazi, bebapha izeluleko, bebonisa labo abafuna ukuvula amabhizinisi ngokuthi imiphi imnyango ekumele beqondane nayo.
“Abathameli bengqungquthela bazothola izincwadi eziqukethe konke ebekufundwa ngakho kuzo lezi nsuku ezimbili, bazothola nokuya ngase thunjini. Kuphinde kube nemiklomelo ezotholwa yilabo abazotonyulwa amagama abo emncintiswaneni. Siyakholelwa ekutheni izo sungula osomabhizinisi bakusasa lokho kuzoqeda inhlupheko emindenini eminingi entulayo,” kusho uNKK Norcott.
NPA to oppose Atul Gupta's AFU challenge
Muizenberg 12:21 PM
Bellville 12:02 PM